ဇော်မျိုး | Page 2
ကျွန်တော် Youtube အသုံးပြုနည်း စာအုပ်လေး တင်ပေးချင်ပါတယ်။ စာအုပ်ထဲမှာ ပါဝင်တဲ. အကြောင်း အ၇ာတွေက တော်တော် ကောင်းပါတယ်။ Youtube မသုံးတတ် တဲ. သူတွေ အတွက် ဒီစာအုပ်လေးက များစွာ အကျိုး၇ှိပါတယ်။ တစ်ဆင်.ခြင်း တစ်ဆင်.ခြင်း ရေးသားထားတဲ. အတွက် စာဖတ်သူတွေအတွက် အသုံးဝင်မဲ. စာအုပ်လေး တစ်အုပ်ပါ။ Youtube ကို စသုံးမယ်ဆို၇င်တော. ဒီစာအုပ်လေး အ၇င် ဖတ်လိုက်ပါ။
Youtube ကိုကောင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါစေ…
Filed under book Tagged with Youtube
Facebook အသုံးပြုနည်း စာအုပ်……
19/02/20122Comments
ကျွန်တော် Facebook အသုံးပြုနည်း စာအုပ်လေး တင်ပေးချင်ပါတယ်။ စာအုပ်ထဲမှာ ပါဝင်တဲ. အကြောင်း အ၇ာတွေက တော်တော် ကောင်းပါတယ်။ Facebook မသုံးတတ် တဲ. သူတွေ အတွက် ဒီစာအုပ်လေးက များစွာ အကျိုး၇ှိပါတယ်။ တစ်ဆင်.ခြင်း တစ်ဆင်.ခြင်း ရေးသားထားတဲ. အတွက် စာဖတ်သူတွေအတွက် အသုံးဝင်မဲ. စာအုပ်လေး တစ်အုပ်ပါ။ Facebook ကို စသုံးမယ်ဆို၇င်တော. ဒီစာအုပ်လေး အ၇င် ဖတ်လိုက်ပါ။
Facebook ကိုကောင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါစေ…..
Filed under book Tagged with facebook
ချယ်ရီမြေ ကွန်ပျူတာ Magazine
ကျွန်တော် ကွန်ပျူတာ နည်းပညာ တွေကို စာအုပ် အဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ. ချယ်ရီမြေ Magazine ဆိုတဲ. စာအုပ်လေး တင်ပေးချင်ပါတယ်။ တော်တော် ကောင်းတယ်ဗျာ။ စာအုပ်ထဲမှာ ပါတဲ. အကြောင်း အ၇ာတွေ ကတော.-
(၁)နည်းပညာ သတင်းနှင်. ဆောင်းပါးများ…
(၂)အသုံးချ Software များ…
(၃)သုတ ၇သ စာပေများ…
တော်တော် ကောင်းတဲ. စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ပါ…
မူရင်းဆိုဒ် : http://www.cherrymyay.com/
Filed under book Tagged with magazine
Valentine’s Day Wallpaper များ…….
ကျွန်တော် Valentine’s Day Desktop Wallpaper လေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပုံလေးတွေကြည်.ပြီး ကြည်နူး၇တာပေါ.ဗျာ။
Filed under ဗဟုသုတ Tagged with wallpaper